इन्टरनेट नचलेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् छिटो बनाउने तरिका इन्टरनेट नचलेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् छिटो बनाउने तरिका – Akhabar Nepal
इन्टरनेट नचलेर हैरान हुनुहुन्छ...
इन्टरनेट नचलेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् छिटो बनाउने तरिका
२०७७, २ जेष्ठ शुक्रबार १५:२१
काठमाडौं: विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन जारी रहँदा अधिकांश मानिसहरु यतिबेला घरमै बसेका छन् । यो बेला इन्टरनेटको प्रयोग अधिक बढेको छ । तर इन्टरनेटको गति एकदमै सुस्त भएर तपाई दिक्क हुनुभएको होला ।
इन्टरनेट बिग्रिएमा वा सुस्त नै भएपनि सम्बन्धित कम्पनीले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै कर्मचारी पठाउन नमानिरहँदा तपाईलाई पक्कै पनि इन्टरनेट कसरी फास्ट बनाउन सकिएला भन्ने मनमा लागेको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा हामी तपाईंहरुलाई केही टिप्स दिदैछौं जसले तपाईंको इन्टरनेटलाई फास्ट बनाउँन मद्दत गर्छ ।
राउटर राखेको स्थान परिवर्तन
राउटर राखिएको स्थानले पनि तपाईको इन्टरनेटको गतिलाई निर्धारण गर्दछ । यदि तपाईको राउटर राखेको स्थान छनोट नै गलत छ भने इन्टरनेट चल्न नै मुस्किल हुन्छ । यसर्थ राउटरलाई भरसक अग्लो स्थान र अरू इलेक्ट्रोनिक आईटमहरुको नजिक नराख्नोस् । यदि एन्टेनासहितको राउटर छ भने, यसको एन्टेनालाई माथि पर्ने गरि राख्नुहोस् ताकि यसले सिंग्नल राम्रोसँग समात्न सकोस् ।
अलग एन्टेना जोड्ने विकल्प
इन्टरनेटले काम गरेको छैन भने अलग्गै अर्को एन्टेना जोडेर पनि फास्ट बनाउन सकिन्छ । राउटरले आन्तरिक एन्टेनामा काम गर्दछ भने गति बढाउन तपाईंसँग बाहिरबाट पनि एन्टेना थप्ने विकल्प छ । बाह्य एन्टेना बजारबाट किन्न सकिन्छ ।
प्रत्येक राउटरको क्षमता निश्चित हुन्छ । जबकी राउटरले सिंग्नल निश्चित क्षेत्रभन्दा पर पुर्‍याउन सक्दैन भने यस्तो बेला तपाईले बुस्टरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि तपाइले रेन्ज एक्सटेण्ड गर्ने बुस्टर पनि जडान गर्न सक्नुहुन्छ ।
राउटर रिबुट गर्नुहोस्
काम सुरू गर्नु अघि तपाईंको वाइफाइ राउटर रिबुट गर्नुहोस् । यो रिबुट हुने बित्तिकै यसले पूरानो मेमोरी खाली हुन्छ र सबै अपडेटहहरू इन्स्टल हुन्छन् । यस बाहेक कसैसँग वाइफाइ पासवर्ड साझेदारी नगर्ने र बेलाबेलामा पासओर्ड परिवर्तन गर्नाले पनि इन्टरनेट फास्ट हुन सक्छ ।